मुर्ति बनाउने व्यावसायमा लगानी कम-फाईदा धेरै - Samata Khabar
Saturday 10th April 2021 | २८ चैत्र २०७७, शनिबार
६ माघ २०७७, मंगलवार ०७:४१
ललितपुर : पाटन ललितपुरको सानो सानो गल्लीहरूमा छिर्दा यता उतिबाट ट्याङ्ग,ट्याङ्ग र टुङ-टुङ गरेको आवाजहरू आइरहेको सुनिन्छ । ती आवाजहरू कांस्यले बनेका मुर्तिहरुमा कटाँकि गरेका आवाजहरू हुन् । सुन्दा अलि कान खाए पनि, ती आवाजहरू व्यस्त युवा उद्यमीहरूको प्रतीक हो ।
एउटा मुर्ति तयार पार्न कम से कम छ जनाको हातबाट जानु पर्छ। सुरुमा मैन लगाउने, मुर्ति ढाल्ने, लिसो लगाउने, कटाँकि गर्ने, सुन लगाउने देखि लिएर अन्त्यमा आँखा कोर्ने सम्म गरेर एउटा मुर्ति तयार हुन्छ । यसको लागि थुप्रै कामदारहरूको जरुरत पर्दछ।
यो पेसाबाट थुप्रै काम नपाएर घरै बसिरहेका वा खाडी मुलुकमा जान लागेका युवाहरूले आफ्नै देशमा बसेर राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । मध्यम र निम्न बर्गिय युवाहरू, जोसँग शिक्षाको कमी छ र आफ्नो व्यवसाय गर्न पर्याप्त स्रोतहरू छैन उनीहरूको लागि यस्तो हस्तकला क्षेत्रमा राम्रो अवसर देखिन्छ।
“साहुकोबाट मुर्तिहरु ल्याई आफ्नै कोठामा बसेर यो काम गर्न सकिन्छ । त्यही अलि अलि सामान, औजारहरू किन्न को लागि १ हजार जति खर्च गरेमा यो काम गर्न सकिन्छ।”
उद्यमी नेपालको टिमले कटाँकि व्यवसायमा लागेका एक जना युवा उद्यमीसँग सानो अन्तरवार्ता लिएको छ । उनको नाम कृष्ण सुनार हो र उनी यो व्यवसायमा लागेको लगभग १२ वर्ष भइसकेको । उनले कांस्यको मुर्तिहरुमा ओचाको ( मुर्ती बनाउन प्रयोग गरिने एक किसिमको औजार ) प्रयोगबाट हातैले बुट्टा कोर्ने र मुर्तिलाई तयार पार्ने काम गर्छन्।
उनीसँग उनको व्यवसाय र अनुभूतिको बारेमा गरिएको छोटो कुराकानी निम्न दिइएको छ :-
तपाईँलाई यो व्यवसायको बारेमा कसरी थाहा भयो र किन यो काममा लाग्नु भयो ?
मैले यो व्यवसायको बारेमा मेरो बुबाबाट थाहा पाएको हुँ । मेरो बुबा पहिले तामाको भाँडाहरू बनाउने काम गर्नु हुन्थ्यो । उहाँले यस्तो कांस्यको मुर्ति बनाउने कामको बारेमा थाहा पाउनु भएछ अनि मलाई भन्नु भयो ।
मैले यो काम थालेको कारण चाहिँ म घरको जेठो छोरा भएकोले सबै घरबार सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि थियो अनि घरको आर्थिक अवस्था पनि अलि कम्जोर थियो। खासै पढाई लेखाई गरेको थिइन् अनि अरू केही सिप नि थिएन, त्यसैले यो काममा नै लागेँ ।
व्यवसाय गर्न कति लगानी गर्नु पर्छ ?
यो व्यवसाय गर्न खासै लगानी गर्नु पर्दैन । साहुकोबाट मुर्तिहरु लिएर आफ्नै कोठामा बसेर यो काम गर्न सकिन्छ । त्यही अलि अलि सामान, औजारहरू किन्न को लागि १ हजार जति खर्च गरेमा यो काम गर्न सकिन्छ। सुरुमा साहुको मै गएर काम सिकेर पछि आफैले थाल्दा पनि हुन्छ ।
तपाईँले के के औजारहरू प्रयोग गर्नु हुन्छ ?
मैले प्रयोग गर्ने औजारहरू भनेका कटा, ओचा, वेद, जौ, छिना, खासी, आदि हुन् । ओचा चाहिँ आफैँले बनाउन सकिन्छ । अर्को चाहिने सामान भनेको ग्यास हो । यी सामग्रीहरू बजारमा किन्न पाइन्छन् ।
यो व्यवसायबाट कति आम्दानी गर्न सकिन्छ ?
राम्रो कटाँकि गर्न जान्नेलाई बजारमा २० देखि २५ हजार सम्म ज्याला दिन्छ । मैले चाहिँ आफ्नै कारखाना भएकोले मुर्ति कटाँकि गरेर मासिक चालिस हजार सम्म कमाउँछु । आम्दानी भनेको आफूले जति बढी काम सकाउन सक्यो त्यतिनै बढी हुन्छ ।
यो व्यवसायमा लाग्न चाहनेहरुलाई कस्तो सुझाव दिन चाहनु हुन्छ ?
यो व्यवसायमा लाग्न धेरै पढेलेखेको हुनु पर्दैन, त्यसैले जो कोहीले पनि यो व्यवसायमा हात हाल्न सक्छन् । तर यो काम भने त्यस्तो सजिलो भने छैन। यो काम सिक्नको लागि धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ, अरू जस्तो एक दुई महिनामै काम सिकिँदैन । यसमा हात बसाल्न धेरै वर्ष काम गर्नु पर्छ । सुरुमा एकै चोटि सजिलो काम हुँदैन खालिस् लगाउने, मुर्ति सफा गर्ने जस्ता कामबाट सुरु गरेर पछि मुर्तिमा रङ्ग लगाउने, आँखा बनाउने जस्ता सिप बिस्तारै सिक्दै जानु पर्छ । यो काममा धेरै लगानी चाहिँदैन तर यो काम गर्नको लगनसिलता चाहिन्छ ।
यी गुण भएका महिलाले पुरुषलाई चरम सन्तुष्टि दिन सक्छन ?
हलेदो र अदुवा : सुन्दरतादेखि रोग निको पार्नेसम्म
थारुयुवाहरुले मलेसियामा माघी महोत्सव मनाउँने
कपाल काटेर पनि मनग्य आम्दानी